Forex Trading Live Quotes | Live Currency Quotes Free
FIVORIANA MIVAVAKA HO ANTSIKA
Ity dynamique, velona, ​​tabilao ity dia manome fahatakaran-kevitra mangarahara momba ny tsenan'ny tsena marina sy manaparitaka azo ampiasaina mandritra ny ora fivarotana. Amin'ny alàlan'ny modely STP (modely vita avy any am-piasana), ny baikonao dia natolotra ho an'ny ECN (tambajotra elektronika nomerika), ho an'ny fifanakalozana ara-barotra mivantana, ao amin'ny dobo famatsian-bola any amin'ny banky. Araka ny hita dia hita ao anaty fiovaovan'ny fiovana, toy ny tsenan'ny FX ihany koa ireo teny fohy ireo. Raha manao fivarotana iray ianao, amin'ny alàlan'ny sehatra nofidiana, ianao dia hahazo ny tena tsena mivantana sy ny fiparitahana tsara indrindra, fa tsy mipetaka, manaparitaka.
Hamarino ny Forex Quotes